Nye onyinye: Gịnị dị mkpa ka ị mara? | Law & More B.V.
blog » Nye onyinye: Gịnị dị mkpa ka ị mara?
Nye onyinye: Gịnị dị mkpa ka ị mara?
Enwere uzo di iche iche site na enyemaka nke onye na - enye spam, dika ichota onye inyeaka kwesiri ma obu usoro nkesa. Akụkụ ọzọ dị mkpa na ọnọdụ a bụ mmekọrịta mmekọrịta iwu n'etiti ndị otu na-achọ ịtụrụ ime site na ịmụba, ndị mmekọ ọ bụla, onye nyere onyinye na spam. Ọ bụ eziokwu na a chọghị nkwekọrịta onyinye maka ịhazi mmekọrịta iwu a. Agbanyeghị, njikọ iwu kwadoro n'etiti ndị ọzọ dị mgbagwoju anya n'ụzọ iwu. Iji gbochie esemokwu n’ọdịnihu na iji mee ka ndị niile nwere nkwenye, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ka ndị otu niile banye na nkwekọrịta onyinye. Nkwekorita nke ndị nyere onyinye na-ahụkwa na nkwekọrịta dị n'etiti ndị chọrọ ịbụ nne na nna na ndị na-enye spam na-apụta ihe doro anya. Nkwekọrịta ọ bụla nke ndị nyere onyinye bụ nkwekọrịta onwe onye, ​​mana nkwekọrịta dị mkpa maka onye ọ bụla, n'ihi na ọ nwekwara nkwekọrịta gbasara nwa ahụ. Site na ịdekọ nkwekọrịta ndị a, a ga-enwekwa obere nghọtahie banyere ọrụ nke onye nyere onyinye na ndụ nwatakịrị. Na mgbakwunye na elele nke nkwekọrịta ndị nyere onyinye nwere ike ịnye ndị niile, blog a na-atụle ihe nkwekọrịta onyinye nyere, ozi ewepụtara na ya na nkwekọrịta nkwekọrịta nwere ike ime na ya.
Gịnị bụ nkwekọrịta onyinye?
Nkwekorita onyinye ma ọ bụ nkwekọrịta onyinye bụ nkwekọrịta nke edere nkwekọrịta n'etiti nne na nna ahụ zubere na onye na-enye onyinye spam. Kemgbe afọ 2014, ụdị inye onyinye abụọ apụwo iche na Netherlands: B na C inye onyinye.
B-inye onyinye pụtara na onye nyere onyinye nke ụlọọgwụ na-amaghị ndị nne na nna ezubere. Agbanyeghị, ụdị ụlọ ọrụ a na-edebanye aha n'ụlọ ọgwụ na Foundation Donor Data Artificial Fertilization. N’ihi ndebanye aha a, ụmụaka ndị ahụ a tụụrụ ime mechara nwee ohere ịchọpụta ebe o si bido. Ozugbo nwa a tụụrụ ime ruru afọ iri na abụọ, ọ nwere ike ịrịọ ụfọdụ ozi gbasara ụdị onyinye a. Isi data metụtara, dịka ọmụmaatụ, ọdịdị, ọrụ, ọnọdụ ezinụlọ yana akparamagwa agwa dịka onye nyere onyinye kwuru n’oge onyinye ahụ. Mgbe nwa a tụụrụ ime ruru afọ iri na isii, ya nwekwara ike ịrịọ data nke ọzọ nke ụdị onye inyeaka a.
C-inye onyinye, n'aka nke ọzọ, pụtara na ọ metụtara onye nyere onyinye nke maara nne na nna zubere. Typedị onye na-enye onyinye a na-abụkarị onye sitere na ndị enyi ma ọ bụ ndị enyi nke ndị nne na nna nwere ike ịbụ ma ọ bụ onye ndị nne na nna nwere ike ịchọta na ntanetị, dịka ọmụmaatụ. Typedị nke ikpeazụ nke ndị na-enye onyinye bụkwa onye na-enye onyinye nke a na-ejikọkarị nkwekọrịta ndị na-enye onyinye. Nnukwu uru nke ụdị onye nyere onyinye bụ na ndị nne na nna ezubere ịmara onye nyere onyinye na ya mere njirimara ya. Ọzọkwa, enweghị ndepụta nchere na insemination nwere ike ịga n'ihu ngwa ngwa. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ka gị na ụdịrị ndị na-enye onyinye na-eme nkwekọrịta dị mma ma dekọọ ha. Nkwekọrịta ndị nyere onyinye nwere ike ịkọwapụta tupu oge eruo ma ọ bụrụ na ajụjụ ma ọ bụ ejighị n'aka. Ọ bụrụ na e nwee akwụkwọ ikpe, nkwekọrịta dị otú ahụ ga-egosi nleghara anya ihe nkwekọrịta ndị ahụ mere bụ na ndị mmadụ kwenyere na ibe ha na ebumnuche ndị otu a nwere oge ha binyere nkwekọrịta ahụ. Iji zere esemokwu iwu na usoro nke onye nyere onyinye, ya mere ọ ga-adị mma ka ị rịọ onye ọka iwu ka enyere gị aka na mbido iji kwado nkwenye ndị nyere onyinye.
Kedu ihe edepụtara na nkwekọrịta onyinye?
Ọtụtụ mgbe, edere ihe ndị a na nkwekọrịta ndị nyere onyinye:
Aha na adreesị nkọwa nke onye nyere onyinye
Aha na adreesị nkọwa nke ndị nne na nna (s)
Nkwekọrịta banyere onyinye spam dị ka oge, nkwukọrịta na njikwa
Akụkụ ahụike dị ka nyocha banyere ntụpọ ihe nketa
Ikike inyocha data ahụike
Ego ọ bụla. Ndị a na-abụkarị ụgwọ njem na ego maka nyocha ahụike nke onye nyere onyinye.
Ikike na ọrụ nke onye nyere onyinye.
Enweghị aha na ikike nzuzo
Ibu nke ndị ọzọ
Ndokwa ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ọnọdụ agbanwee ọnọdụ
Ikike iwu na ọrụ dịịrị nwa ahụ
N'ihe banyere nwa a tụụrụ ime, onye na-amaghị onyinye anaghị enwekarị ọrụ iwu. Dịka ọmụmaatụ, onye nyere onyinye enweghị ike ịkwado na ọ bụ nne na nna nke nwa ahụ a tụụrụ ime. Nke a anaghị agbanwe eziokwu ahụ bụ na n'ọnọdụ ụfọdụ ọ ga-ekwe omume onye nyere onyinye ịghọ nne ma ọ bụ nna nwa ahụ n'ụzọ iwu kwadoro. Nanị ụzọ onye nyere onyinye maka ịbụ nne na nna iwu bụ site n'ịghọta nwa amụrụ. Otú ọ dị, a chọrọ nkwenye nke nne na nna ahụ ga-abụ maka nke a. Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ atụrụ ime enweelarị nne na nna iwu kwadoro, ọ gaghị ekwe omume onye nyere onyinye ịmata nwa ahụ tụụrụ ime, ọbụlagodi site na ikike. Ikike dị iche maka onye nyere onyinye. N'okwu ahụ, dịka ọmụmaatụ, atụmatụ nleta na alimonye nwekwara ike ịrụ ọrụ. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị na ya maka ndị nne na nna na-aga n'ihu iji soro onye nyere onyinye tụlee ma dekọọ isi ihe ndị a:
Nzụlite iwu. Site na isoro onye nyere onyinye tụlere okwu a, ndị nne na nna nwere ike izere na ọ tụrụ ha n'anya na eziokwu bụ na onye nyere onyinye ahụ chọrọ ịmata nwa a tụụrụ ime dị ka nke ya wee chọọ ịbụ nne ma ọ bụ nna iwu. Ya mere, ọ dị mkpa ịjụ onye nyere onyinye tupu ọ ga-achọ ịmata nwata na / ma ọ bụ nwee ikike nchekwa. Iji zere mkparịta ụka mgbe nke ahụ gasịrị, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịdekọkwa ihe a tụlere n'etiti onye nyere onyinye na nne na nna ezubere maka nke a na nkwekọrịta onyinye. N’echiche a, nkwekọrịta nke ndị nyere onyinye na-echedokwara nne ma ọ bụ nna iwu nne na nna e zubere.
Kpọtụrụ na onye nlekọta. Nke a bụ akụkụ ọzọ dị mkpa nke kwesịrị ka ndị nne na nna na-enye onyinye na ndị nyere onyinye tụlere tupu oge eruo. N'ikwu ya n'ụzọ doro anya, enwere ike ịhazi ya ma a ga-enwe kọntaktị n'etiti spam na-enye onyinye na nwa ahụ. Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, nkwekọrịta nke ndị nyere onyinye nwekwara ike ịkọwapụta ọnọdụ nke a ga-eme. Ma ọ bụghị ya, nke a nwere ike igbochi nwa a tụụrụ ime ka ọ bụrụ (achọghị) na mberede. Na omume, enwere ndịiche na nkwekọrịta ndị nne na nna na ndị chọrọ inye spam na-eme onwe ha. Otu onye na-enye spam ga-enwe mkparịta ụka kwa ọnwa ma ọ bụ otu ụzọ n'ụzọ anọ nke nwata, onye ọzọ na-enye spam agaghị ezute nwa ahụ ruo mgbe ha ruru iri na isii. Mee elu mee ala, ọ dịịrị onye nyere onyinye na ndị nne na nna ga-ekwenye na nke a ọnụ.
Nkwado ụmụaka. Mgbe ekwuputara ya nke oma na nkwekọrịta onyinye nye na onye nyere onyinye ya na-enye naanị mkpụrụ ya maka nne na nna ahụ ezubere, ya bụ ịsịghị ihe ọ bụla karịa ime ka ọ dịrị maka ịmụ nwa, onye nyere onyinye anaghị akwụ ụgwọ nkwado ụmụaka. E kwuwerị, ọ bụrụ na ọ bụghị onye kpatara nsogbu. Ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe, ọ ga-ekwe omume na a na-ahụ onye nyere onyinye ka ọ bụrụ onye na-akpata ya ma họpụta ya dị ka nna iwu site na ọrụ nna, onye ga-akwụ ụgwọ mmezi. Nke a pụtara na nkwekọrịta ndị nyere onyinye abụghị naanị ihe dị mkpa maka nne na nna ahụ, ma ọ dịkwa mkpa maka onye nyere onyinye. Site na nkwekọrịta onyinye, onye nyere onyinye nwere ike gosipụta na ọ bụ onye na-enye onyinye, nke na-eme ka o doo anya na nne na nna ahụ agaghị enweta ikike.
Idepụta, ịlele ma ọ bụ ịhazi nkwekọrịta onyinye
You nweelarị nkwekọrịta inye onyinye ma enwere ọnọdụ gbanwere maka gị ma ọ bụ maka onye nyere onyinye? Mgbe ahụ, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịgbanwe nkwekọrịta onyinye. Chee maka ijegharị nke nwere nsonaazụ maka nhazi nleta ahụ. Ma ọ bụ mgbanwe ego, nke chọrọ nyocha nke alimoni. Ọ bụrụ na ị gbanwee nkwekọrịta n'oge ma kwekọrịta nkwekọrịta nke ndị abụọ ahụ na-akwado, ị na-amụba ohere nke ndụ kwụsiri ike na nke udo, ọ bụghị naanị maka onwe gị, kamakwa maka nwa ahụ.
Ọnọdụ ndị ahụ ọ dị otú ọ dịịrị gị? Ọbụna mgbe ahụ, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ka onye ọka iwu na-ahụ maka inye onyinye gị. Na Law & More anyị ghọtara na ọnọdụ ọ bụla dị iche. Ọ bụ ya mere anyị ji agakwuru onwe anyị. Law & MoreNdị ọkàiwu bụ ndị ọkachamara na iwu ezinụlọ ma nwee ike nyochaa ọnọdụ gị na gị wee chọpụta ma nkwekọrịta ndị nyere onyinye kwesiri mgbanwe ọ bụla.
Ga-achọ ịmepụta nkwekọrịta ndị nyere onyinye n'okpuru nduzi nke ọka iwu ọka iwu ezinụlọ? Ọbụna mgbe ahụ Law & More dị njikere maka gị. Ndị ọka iwu anyị nwekwara ike inye gị ndụmọdụ gbasara enyemaka gbasara iwu ma ọ bụ ndụmọdụ ma ọ bụrụ na esemokwu dị n'etiti nne na nna ahụ ezubere na onye nyere onyinye. You nwere ajụjụ ndị ọzọ n’isiokwu a? Biko kpọtụrụ Law & More, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka.
Previous Post Nyefee nke ịrụ
Next Post Ikpe na ikpe ihu igwe megide Shell
Dị ezigala. Daalụ.